Xukuumadda Somaliland oo ka hadashay Shaqaaqo dhimasho iyo dhaamac keentay oo ka dhacday Hargeysa | Somaliland.Org
Xukuumadda Somaliland oo ka hadashay Shaqaaqo dhimasho iyo dhaamac keentay oo ka dhacday Hargeysa
December 7, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org) Xukuumada Somaliland ayaa ka hadashay shaqaaqooyinka maanta iyo xalay ka dhacay degmada Axmed Dhagax ee Magaalada Hargeysa oo ay ku dhinteen laba qof kuna dhaawacmeen illaa todoba 7 qof oo kale.
Wasiirka wasaarada arrimaha gudaha Somaliland. Md. Maxamed Nuur Caraalle (Duur) iyo taliyaha ciidanka booliska Cabdilaahi Fadal Iimaan, oo maanta u waramay laanta af-soomaliga BBCda,ayaa ka digay khatarta muranka ka dhashay ee najiitadii doorashada ee xalay lagu dhaawaqay.
Wasiir Duur waxa uu sheegay in ay xukuumada ka shaqaysay sidii Sallaadiinta iyo madaxda ururka Xaqsoor u dejin lahaayeen xiisada taagan, waxaana uu dadka taageera ururka ugu baaqay in ay kicin qalalaase, isaga oo ku tilmaamay guddoomiye Muj. Xasan Ciise Jaamac yahay muj. Wadanka u soo halgamay wax badan u soo qabtay Somaliland.
“Runtii waxa aanu ilaa xalay (habeen hore) ka shaqaynaynay in aanu helno Salaadiinta iyo Hogaanka Urur-siyaasadeedka Xaqsoor oo runtii ah nin dalka u soo halgamay, markaa waxa aanu doonaynay in arrinta halkaas aanu ku dhammayno oo si dublamaasiyadeed arrinta loo dhammeeyo. Xasan Ciisanna waxaan leeyahay samcada haka dilinna, kuwa leh mudaharaad dhiga ee TV-yada ka hadlayana waxaan leeyahay Addeer ka daaya” ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha Somaliland.
Taliyaha ciidanka booliska Somaliland, Cabdilaahi Fadal Iimaan, ayaa ku baaqay rabshada la joojiyo nabad galyadana la ilaaliyo, waxaanu sheegay in mudaharaadyada lagu baaqay ay sii xumayn doonaan xaalada hadda oo qasan, isla markaana loo baahan yahay in ay la joojiyo xasaradaha .
Previous PostWaxa Guuleystay Waa DalkaSomaliland ee Maaha Shakhsiyaad, Ururo/XisbiyoNext Post“Waxaanu Dhalinyaradda ku baraarujinay In wax la siistaa Jirin Qaranimadda Somaliland”	Blog